Si aad u habboon u diyaarsadaan oo u raacaan kala guurka laga bilaabo kindergarten illaa dugsiga
Horumarin adigoon waxba ka-dhigin - ilamahaaga u muuji masuuliyadaha ka hor inta uusan bilaabin dugsiga
Marka ugu horeysa ee dugsiga - hubi inaad haysato nasasho kugu filan
Da'da lix jir, halista noloshu waxay bilaabmaysaa: carruurta loo isticmaalo in ay maqlaan weedhahan ama kuwa la midka ah maalmaha hore markii ay isqoristu soo dhowaato.
Laga bilaabo ilmo-xannaaneeyaha illaa arday - isku-beddel siman
Sanadihii ugu danbeeyay, manhajka dugsiyada hoose ayaa badalay isbeddelka macallimiintana ay isku dayayaan in ay u sahlaan carruurta inay bilaabaan dugsiga iyaga oo ku daraya waxyaabo badan oo ciyaara fasalka dhexdiisa oo si ula kac ah u yareynaya cabsida. Iskaashiga ka dhexeeya xanaanada caruurta iyo dugsiga hoose ayaa sidoo kale ka fiicnaaday meelo badan.
Si kastaba ha noqotee, caruur badan oo dugsi gaaban waxay dareemayaan wax ka badan farxad marka ay ka fekerayaan kaalintooda cusub ee dugsiga. Kadib, marxaladdan cusub ee noloshu waxay la socotaa isbaddallo muhiim ah oo muhiim ah iyo, inta badan, waajibaadka.
Wadajirta barayaasha, waalid ahaan waa inaad ku dadaaleysaa inaad kala guurka u dhaxayso xanaanada iyo dugsiga sida ugu macquulsan iyo inaad ilmahaaga u diyaariso caqabadaha cusub.
Farqiga weyn ee u dhexeeya kobcinta dugsiga xanaanada iyo habka waxbarashada ee dugsiga waa in ilmaha dugsiga jooga si lama filaan ah u leeyahay masuuliyad badan. Waxay awoodi weyday inay ciyaaraan, qoslaan oo ruxaan maalinta oo dhan, si lama filaan ah 45 waa inay taleefanka ku jirtaa dhowr daqiiqo mar, markasta oo ay sii wadaan buugaagtooda, diyaarinayaan casharrada guriga iyo inay qoraan xarfaha nadiifka ah.
Tani waa naxdin dad badan. Sidaa darteed, waxa macquul ah in la qoro carruurta horay u diiwaan gashan deymaha. Tani macnaheedu maahan in kuwa yaryar ay tahay in ay sameeyaan jimicsi qoraal ama jimicsi maalin kasta. Waxaa jira fursado kale.
Bilowga dugsiga oo bilawga nolosha dugsiga
Tusaale ahaan, haddii ilmahaagu rabo inuu dhigto naadiga jimicsiga ama dugsiga muusikada, waa inay marka hore ka qaybqaataan cashar aan cidhiidhi ahayn. Kadibna waxay go'aan ka gaari kartaa haddii ka-qaybgal kale uu u-qalmo ama aanu ahayn. Laakiin: Marka cunuggaagu go'aansado, waa inuu sidaan sidan - gaar ahaan haddii khidmadda sanadlaha ah la bixiyo.
Xitaa nolol maalmeedka waxaa jira xaalado qoys kasta oo uu ilmuhu xannaanadda ka qaadi karo shaqooyinka qaarkood. Tusaale ahaan, gabadhaada ama wiilkaaga u gudbi hawsha qaadista qashinka, tagta roodhiinka, ama miiska si joogto ah u dhig. Tani waxay ku dili doontaa dhowr shimbirood oo leh hal dhagax, maxaa yeelay ilmahaagu ma aha oo kaliya dareen ah waajibaad, laakiin sidoo kale wuxuu dareensan yahay in si dhab ah loo qaato. Intaa waxaa dheer, kalsoonidiisa ayaa la xoojiyay.
Intaa waxaa dheer, marwalba ku dhiirigeli ilmahaaga inuu ku fakaro, daawado, oo dhagaysto. Muxuu barayaashu ka warramay safarka? Qiimahee ayaa looga baahan yahay waxqabadka xisbiyada xagaaga? Waa maxay ikhtiyaaraadka cunugaagu uu u arko inuu dejinayo khilaafaadka u dhaxeeya labada raaxo ee ugu fiican?
Marka aad sidaas sameyneysid, waxaad sidoo kale dhiirigelineysaa karti-u-qaadka iyo inaad ku fekerto habka xalinta. Labadan karti ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay ardayda, maaddaama ay taasi fududeynayso geeddi-socodka barashada si waxtar leh.
Waxaa kale oo muhiim ah: U ogolow cunugaaga in uu isku dayo inta ugu badan ee suurtagal ah iyo kor u qaado madaxbanaanida. Tusaale ahaan, marka ay timaado dugsiga, waa inay awood u yeelato inay keligaa dhar gashato, isu abaabusho, oo ay daryeesho alaabadooda gaarka ah.
Gaar ahaan asbuucyada ugu horreeya ee iskuulku waxay gaar u yihiin carruurta. Ma aha oo keliya inaad u isticmaasho barashada barashada, waa inaad sidoo kale ka heshaa hareeraha dhismaha aan la garaneynin, inaad u barto habka iskuulka oo aad u qaadato meesha aad ku dhexjirto bulshada fasalka. Shaqada guriga waa galabtii.
Bilowga dugsiga waa inuu la socdaa waalidka
Inta lagu jiro waqtigan, sida hooyo ama aabe, waa in aad hubisaa in ilmahaagu helo hurdo ku filan oo uu haysto waqti uu ku soo kabsado maalinta. V
Isku day in aad ilaaliso tirada ballamada galabnimada sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah si wiilkaaga ama gabadhaada ay ula kulmi karaan saaxiibo ama degaan qolkooda.
Ha ku cadaadin ilmahaaga haddii ay adag tahay in la buuxiyo shuruudaha waxbarashada. Qaar badan oo ka mid ah ardayda fasalka koowaad waxay la tartamaan si ay u ammaanaan macallinka oo ay waligood hoos ugu dhigaan walwalka. Ku dhiiri geli ilmahaaga inuu ka caawiyo shaqada guriga, laakiin aqbal haddii ay diidaan caawimadaada.
Waxaa kale oo muhiim ah: haddii ilmahaagu qalad sameeyo, ha saxin. Haddii kale, macalimiintu waxay hoos u dhigayaan heerka waxqabad ee ilmahaaga, natiijooyinkuna waxay noqon doonaan kuwo niyadjabsan baaritaanada hore.
Haddii aad ogtahay in ilmahaagu uu ka baqayo, raadi wadahadalka macalinka fasalka. Ardayda fasalka kowaad waa inaysan ka badnayn 30 illaa 40 daqiiqadaha shaqada guriga.
midabaynta Nessie ka Loch Ness
Dib u habee qolka fadhiga
Maxay uga xumaatay meesha? carruurta su'aal
Daryeelka ilmaha - wajiga ilmaha
Sida loo helo xanaanada caruurta ee saxda ah
Xannaanooyinka laba-luqadlaha ah
Abaalmarinta Farshaxanka Baraha Caruurta